Sina 3ply saron-tava azo esorina amin'ny karazana I, Type II, mpanamboatra Type IIR ary mpamatsy | Orient
Saron-tava tarehy azo ampiasaina 3ply amin'ny karazana I, Type II, Type IIR
Ilay sarontava fandidiana azo alefa dia misy sosona ivelany tsy misy tenona 3, sosona miempo 98% ary sosona anatiny tsy misy tenona izay misy sosona ambonin-hypoallergenic malemy izay misoroka ny fahasosoran'ny hoditra na ny olana amin'ny allergy.
95% na hatramin'ny 99%
tadivavarana na mamatotra
fotsy, manga, maintso, mavokely sns
50pcs / boaty, boaty 40 / ctn
ao anatin'ny 30 andro aorian'ny fanamafisana ny baiko
Ply ivelany: 20GSM na 25GSM / m2 (fotsy / manga / maitso / mavokely / mena / mavo na loko hafa) Polypropylene Spun mifamatotra
Ply sivana afovoany: 20GSM / 25GSM / m2 (sivana fotsy mitsoka notsofina);
ply anatiny: 18GSM na 20GSM / m2
1.Ny sarontava fandidiana azo alefa dia misy sosona ivelany tsy misy tenona ivelany, sosona mihosin-tsofina 98% ary sosona anatiny tsy misy tenona izay misy sosona ambonin-hypoallergenic malemy izay misoroka ny fahasosoran'ny hoditra na ny olana amin'ny allergy. Ny vokatra dia mifanaraka amin'ny EN14683 karazana II, ny fenitra IIR karazana.
2.Tsy mahasosotra sy mora miaina, manome fahombiazana tsara miaina miaraka amin'ny tsindry samihafa. Fahombiazan'ny filtration bakteria avo lenta.
Loopan'ny sofina malefaka sy mahazo aina
3.Ny fitaovana tadiavina ny sofina dia vita amin'ny elastika Lycra boribory malalaka any Latex izay manalava ny tahan'ny 1: 2 ka mahatonga azy io ho mora hitafy sy esorina amin'ny fampiononana.
4.Ny tariby orona malleable dia azo ovaina amin'ny famolahana, mifanaraka amin'ny tetezana amin'ny orona sy tarehy.
1.Ny sarontava ara-pitsaboana azo ampiasaina dia misy vatan-tava, sarontava ary orona. Ny vatan-tava dia vita amin'ny lamba tsy tenona sy lamba tsy voatenona tsy voatenona, ny rakotra orona dia vita amin'ny fitaovana plastika azo aforitra, ny karazana fehikibo saron-tava A dia vita amin'ny lamba lasitike, ary ny karazany B dia vita amin'ny lamba tsy tenona;
2. Ny fahombiazan'ny sivana amin'ny bakteria dia tsy latsaky ny 95%. Ny fanoherana ny rivotra dia tsy mihoatra ny 49Pa / cm2. Ny totalin'ny zanatany bakteria dia≤100CFU / gE coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, hemolytic streptococcus, ary holatra shtsy ho hita daholo.
Taratasy fanamarihana: CE ISO FDA, White voasoratra ao Shina.
Previous: Akanjo miaro amin'ny fanary matihanina matihanina
Manaraka: Stetoscope ORT103A
Saron-tava vovoka FFP2 miaraka amin'ny CE ISO FDA
Fonon-tanana Nitrile / PVC
Cone karazana Disposable Partulateate Respirator